रजतपटले चरित्रहत्या गरेको भन्दै गरिमा रुँदै आइन् लाइभ ! – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाजरजतपटले चरित्रहत्या गरेको भन्दै गरिमा रुँदै आइन् लाइभ !
उदयीमान मोडल गरिमा शर्मा केही समयअघि गायक दुर्गेश थापासँग टीकटक लाइभमा आइन् । लाइभमा यी दुईबीच भएको कुराकानीको एउटा टुक्रा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो ।
भाइरल भएको क्लीपमा दुर्गेश र गरिमाको संवाद सुन्दा उनीहरुबीचको लामो प्रेम सम्वन्ध भर्खरै टुटेको छनक मिल्छ । यसले धेरै दर्शकलाई आश्चर्यमा पारिरहेको थियो, किनकी दुर्गेश एक विवाहित पुरुष हुन् । उनीहरु प्रेम सम्वन्धमा रहेको चर्चा कहिल्यै थिएन ।
यसैबीच घटनाले नयाँ मोड लियो, जब विवादास्पद टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटले यो भिडियो क्लीपलाई ‘समाचार’ नै बनाइदियो । उक्त संवादको वास्तविकता नखोजिकन विवाहित पुरुषसँग प्रेम सम्वन्धमा रहेको भनेर गरिमामाथि रजतपटले लान्छना लगाएको छ । कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुबेदीले ‘बिनाशकाले विपरित बुद्धि’ भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
रजतपट कार्यक्रममा यसरी ‘रिपोर्ट’ प्रकाशित भएपछि गरिमा आक्रोशित बनेकी छन् । भ्रामक समाचार प्रशारण गरेर आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै उनी हिजो राति टिकटकमा रुँदै लाइभ आइन् । उनले रजतपट कार्यक्रम र प्रस्तोताविरुद्ध कानूनी कारवाहीमा जाने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।
टिकटकमा लाइभमा आएर दुर्गेस र गरिमाले खेल खेले । खेल खेल्ने क्रममा दुर्गेसले गरिमालाई भनेका छन्–‘तिमीले आफ्नो पूर्व प्रेमीलाई भेट्यौं । अब, उसँग कसरी कुरा गर्छौ ?’यही बिषयमा खेल खेल्ने क्रममा दुर्गेसले गरिमालाई मुख छाडेका छन् । जुन क्लिप्स भाइरल भयो ।